ရန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တစ်နေ့ကိုကြောက်တယ် - JAPO Japanese News
ေသာ 10 Jan 2020, 12:24 ညေန
ဂျပန်မှာ ထမင်းဘူးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ကျောင်းတွေမှာ နေ့လည်စာရနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်ထမင်းဘူးယူသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ အလုပ်သွားတဲ့သူတော်တော်များများဟာလည်း ကျန်းမာရေးအရအစားအသောက်ထိန်းသိမ်းပြီး ပိုက်ဆံချွေတာတဲ့အနေနဲ့ ထမင်းဘူးယူသွားကြပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အမေကထမင်းဘူးထည့်ပေးတယ်။ လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဇနီးသည်ကထမင်းဘူးထည့်ပေးတာများတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝတွေကိုအလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးကတော့ အမေနဲ့ဇနီးသည်ပါပဲ။ သူတို့နဲ့ရန်ဖြစ်လို့မရပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရန်ဖြစ်မိတဲ့နောက်တစ်နေ့မှာ ထည့်‌ပေးလိုက်တဲ့ထမင်းဘူးအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာကိုအမြဲကြုံတွေ့ရလို့ပါ။
クソ (Shit) လို့ရေးထားတဲ့ အမေရဲ့ အဆဲစကား !
ဟိုးအရင်တုန်းကပေါ့၊ ပိုက်ဆံသိပ်မရှိတဲ့ခေတ်တုန်းက ဂျပန်ထမင်းဘူးဆိုတာ ထမင်းရဲ့အပေါ်မှာ မက်မန်းသီး‌ခြောက်အကြီးကြီးတစ်လုံးတင်ထားတဲ့ 日の丸弁当 (Hinomaru Bento) လို့ခေါ်တဲ့နေ့လည်စာထမင်းဘူးပါ။
Hinomaru ထမင်းဘူးက ဂျပန်နိုင်ငံအလံနှင့်ဆင်ပါတယ်။
ယခုအချိန်အထိအသုံးပြုနေဆဲပါပဲ။ ထမင်းဘူးအပြင် အရံဟင်းအနေနဲ့လည်းပါဝင်ပါတယ်။
အမေရေ. . . ထမင်းထက်မက်မန်းသီးခြောက်တွေကများနေပါ‌ရောလား ?
ဒီဟာကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါဦး . . .အမေ့ရဲ့ထမင်းဘူးက စာတောင်ပါလိုက်သေးတယ်။
တို့ဖူးပေါ်မှာ ပဲပိစပ်ဆော့စ်ကိုစမ်းထားတဲ့ဟာပေါ့။ ကျမ်းမာရေးအရတော့ကောင်းတယ်လို့တွေးမိပေမယ့် . . .
လူတွေရဲ့အရှေ့မှာ ထမင်းဘူးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အရမ်းကိုရှက်သွားစေမယ့်ပုံစံပေါ့။ ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ထမင်းဘူးတွေထက် ဇနီးသည်ဆီကဒီလိုရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ထမင်းဘူးကိုရလိုက်ရင်တော့ အဆ၁၀၀ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ထမင်းတစ်ထပ်ဟင်းတစ်ထပ်ဖြစ်ရမှာကို ကြည့်ပါဦး နှစ်ထပ်စလုံးကထမင်းတွေချည်းပဲ။
တိုက်ရိုက်ပြောဖို့ခက်တဲ့အခါ ထမင်းဘူးမှာ တောင်းပန်ပါတယ်လို့‌‌ရေးထားတဲ့စာသားလေး။ ဒါလေးကတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ပါစေခွင့်လွှတ်ပေးချင်မိသွားမယ်ထင်တယ်။
ကဲ. . . ဘယ်လိုလဲ ? အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့အဓိကပဲ့ကိုင်ရှင်အာဏာရှိတဲ့သူက အမျိုးသမီးဖြစ်နေလို့ သူတို့ကို ဒေါသထွက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးနော်။ မီးပွင့်သွားမယ် ဘာမှတ်! နောက်တစ်နေ့ထမင်းဘူးမှာကြောက်ဖို့ကောင်းတာတွေမတွေ့ချင်ရင်တော့ အဆင်‌ပြေအောင်နေကြစို့နော်။
Sailor Moon ပုံေတြဆြဲၿပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္း fan ေတြနဲ႔ဆက္သြယ္ရေအာင္ !!!
နပန္းသမားလည္း အသည္းႏွလုံးနဲ႔ပါ !!!!!!
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေတြ႕ႏိုင္တဲ့ ဂ်ပန္
そばめし( Zoba Meshi ) ကို အိမ္မွာလုပ္စားလိုက္ရေအာင္ ！
ေနာက္ဆုံးေတာ့ Takoyaki လည္းမိုက္လာၿပီ !
လက္ရွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ Bubble Tea နဲ႔ အမႈိက္ျပႆနာ
ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြ ဘာေၾကာင့္ ခရစ္စမတ္မွာ ၾကက္ေၾကာ္စားတာလဲ ?
ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ဆူရွီဆိုင္ဖြင့္ထားရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း
စားလို႔ရတဲ့ ခြက္ ?
20 ထရီလီယံယန္းတန္ဖိုးရွိတဲ့ ဥစၥာဓနေတြကို တစ္ေနရာရာမွာ ဝွက္ထားတယ္!
တိုက္ပြဲေၾကာင့္ နက္ရႈိင္းတဲ့ရင္းႏွီးမႈေတြရေစခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲ ?
ဧည့္သည္ကို ブス女 ဆိုၿပီး႐ိုင္းပ်တဲ့စကားလုံးေပးမိလိုက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ !!!
My 富士山 ကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးလိုက္ရေအာင္ !!!!!!
ဆာမူ႐ိုင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ အထီးက်န္အိမ္ !!!!!
အင္တာနက္မွာ ေဝဖန္ခံရမႈေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသျခင္း?
Mamaya ရဲ႕ဟင္းခ်က္နည္းအပိုင္း ၃ !!!